I-RARE: Ukuzola nokuphumula e-Nantes!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jérôme
Leli fulethi elingu-30m² lihlehlisiwe ukusuka e-Boulevard Jules Verne, endaweni ethule, imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha. Ningakwazi nobabili ukujabulela izinto ezikhangayo zedolobha futhi nishaje amabhethri akho kusihlwa ngemva kosuku oluhle.
Ifulethi lihlome ngokuphelele. Sikunikeza zonke izakhi ezidingekayo ukuze ube nokuhlala kamnandi.
Uzoba nendawo yokupaka yangasese. Isebenza kakhulu ukuze ungachithi amahora ufuna indawo!
Ukujikijelwa kwetshe kusuka enhliziyweni yomlando yeNantes, ifulethi elithi "Au pei de Naunnt" liyindawo ekahle yokuhlala edolobheni lezingadi eziyi-100. Izokujabulisa ngomhlobiso wayo othokomele futhi ophumuzayo. Uyohlale ugezwa ngokukhanya ngenxa yokuma kwayo eningizimu kanye nefasitela le-bay egumbini lokuphumula elivumela imisebe yelanga idlule. Kusukela kokugcina, ungajabulela umbono wengadi enemithi yendawo yokuhlala lapho izinyoni ziza khona zizocula ekuseni ukuze zivuke kamnandi. Ngenhlanhla encane, ungase ubone ngisho ne-squirrel encane efika nsuku zonke izodla emagatsheni. Ikhona langempela lemvelo edolobheni!
Imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka enkabeni yedolobha, ifulethi elithi "Au pei de Naunnt" lijabulela indawo enhle kakhulu. Uzothola yonke into esizeni: izitolo, indawo yokudlela, izithuthi zomphakathi, indawo yokupaka yangasese, njll. Kwanele ukuze ujabulele ngokugcwele ukuhlala kwakho ngaphandle kokukhathazeka ngezinkathazo ezincane zokuphila kwansuku zonke.
"AU PEI DE NAUNNT", APARTMENT OKUGCWELE
Enye yezimpahla eziyinhloko eyenza le ndawo yokuhlala engu-30m² indawo yephupho yokuhlala isikhashana inani nekhwalithi yezinsiza zayo. On ekungeneni, uyobe kuqala uthole libanzi futhi egqamile egumbini lokuphumula, ifakwe usofa zaseScandinavia lapho uzobe kahle efakwe ukuze baphumule incwadi enhle noma ukubukela omunye izinhlelo ezihlinzekwa omunye iziteshi 200 nasezenzakalweni flat .
Kuleli gumbi lokuhlala lapho uzoba nezidlo zakho zibheke efasiteleni elikhulu le-bay ngokubuka ingadi, indawo ekahle yokubuka ukuntwela kokusa ekuqaleni kokusa, ngesikhathi sakho sasekuseni, futhi isibhakabhaka sibebomvu ngenxa yesilungiselelo. ilanga. ekupheleni kosuku.
Ngesikhathi sokulala, uzolala ngokuthula embhedeni wabantu ababili endaweni yokulala. Umatilasi usezingeni eliphezulu kakhulu. Ibuye ilungele abantu abanobuhlungu beqolo. Kulesi sikhala esincane esithokomele, uphahla lwengilazi luvumela ukukhanya ukuthi kungene, okunikeza umuzwa wangempela womoya nokuzola. Ebusuku, amapaneli aseJapane namakhethini aluhlaza akuvumela ukuba ulale ngasese.
Ekugcineni, ngesikhathi sokudla, abahahayo kakhulu bayojabulela ukukwazi ukulungisa ukudla okumnandi besebenzisa i-panoply yezitsha, izinti ze-ceramic kanye nohhavini ekhishini elihlomele. Lapho ukudla sekuphelile, ngeke kudingeke ukugeza izitsha. Umshini wokuwasha izitsha uzokusebenzela ngenkathi uphumule endlini yokuphumula.
"AU PEI DE NAUNNT", ZONKE IZINTO EZISEMATHENI ZAKHO
Ngaphezu kwekhwalithi yalezi zakhiwo, ifulethi elithi "Au pei de Naunnt" lijabulela indawo enhle kakhulu yendawo. Iseduze nakho konke. Phansi kwendawo yokuhlala, ibhikawozi livulwa ngeSonto ekuseni ukudla kwasekuseni ngamakhekhe asanda kubhakwa. Ngokuphambene, abathandi bamawayini amnandi bazojabulela ukuthola umthengisi wewayini onekhethelo lamawayini avela kuzo zonke izifunda zaseFrance.
Izinyathelo ezimbalwa ukusuka, ku-boulevard, kutholakala i-nugget encane ye-Culinary: "Le Comptoir de Jules". Kule ndawo yokudlela, uzodla ngokunambitha i-crêpe tatin ehlotshiswe ngezingcezu zamahhabhula ashisayo agcotshwe ngebhotela elinosawoti i-caramel. Okumnandi! Ngemva kwesikhathi esingaba usuku ezinhle esilichithe Nantes, ifofobaliswa ukukhathala okuthile, futhi ukhungathekile ngenxa yokubhekana ubuvila angenakuvinjwa nganoma umcabango wokuba ukupheka, lena indawo ekahle ukuze uphumule futhi ukukhonzwa ngenkathi obujabulela, e isitayela Breton langempela, i-galette emnandi ehambisana nesitsha se-cider.
Kodwa akugcini lapho. Ifulethi nalo liseduze kakhulu nezithuthi zomphakathi. Emnyango wendawo yokuhlala, ulayini webhasi i-C1 uthatha imizuzu eyi-10 ukuya enkabeni yedolobha. Ngakho-ke noma ungayazi i-Nantes, ungakwazi ukuya kalula ezindaweni ezihlukahlukene zezivakashi edolobheni (Château des Ducs de Bretagne, Passage Pommeraye, Jardin des Plantes, njll.).
“IN PEI DE NAUNNT”, THE PAYS DE LA LOIRE, ISIFUNDA ESIHLE ESIGCWELE INGCEBO
E-Nantes, inkaba yedolobha akuyona ukuphela kwendawo ethokozisayo ongayivakashela. Ngempela, kunezinto eziningi ongazibona futhi uzenze endaweni ezungezile. Kubandakanya, isibonelo:
- Enye yezingadi eziyi-100 zedolobha
- Indlela yamasiko namabhishi ayo anesihlabathi esihle
- Idolobhana langaphambili lokudoba laseTrentemoult
Uma unemoto, ongayipaka endaweni yangasese emnyango wesakhiwo, nakhu okufanele ungaphuthelwa nhlobo:
- Amaxhaphozi eGoulaine, indawo enezilwane nezitshalo ezihlukahlukene
- Clisson, ekhoneni elincane lase-Italy maphakathi ne-Loire-Atlantique
- Kwabafuna injabulo, ipaki yokuzijabulisa yaseNaudières, eklanyelwe abantu abadala ngokukhethekile
Ekugcineni, uma usukulungele ukujula kancane kule ndawo ebabazekayo, kungani ungayi ogwini lolwandle, oluqhele ngemizuzu engu-45, edolobheni elihle laseGuérande, elidume ngosawoti walo ongavamile?
Kodwa mhlawumbe ungancamela ukubuyela emuva bese uyaqhaqhazela phambi kwempi yabadlali bezempi noma umjaho wezinqola zamaRoma ePuy du Fou, avotele ipaki elingcono kakhulu emhlabeni!
"AU PEI DE NAUNNT", Ifulethi lonke elingaphansi kwehhotela
Sifuna ukuthi weneliseke ngokuvakasha kwakho kokuthi “Au pei de Naunnt”. Kungakho, ngaphezu kwezindawo zokuhlala ezihlome ngokuphelele, sinikeza isevisi ephelele yokwenza ukuphila kwakho kube lula. Ngakho ngeke udinge lutho ngaphandle kwezimpahla zakho siqu.
- Izingubo zokulala eziphelele
- Insipho neshampoo
- Ikhofi / itiye
- Umshini wokuwasha izitsha namaphilisi
- Insipho yokugeza izitsha
- Umshini wokuwasha, ilondolo, indawo yokomisa, ibhodi loku-ayina ne-ayina
- Iflaya yezokuvakasha
- Imephu yedolobha nezokuthutha
Nakhu. Uma naphezu kwalesi sethulo usesenemibuzo, ungangabazi ukungithinta. Kuyinjabulo enkulu ukuthi ngizokuphendula.
4.76(147 okushiwo abanye)
4.76 · 147 okushiwo abanye
Kukhona zonke izitolo ezidingekayo phakathi kwe-5mins yokuhamba ukusuka lapho uhlala khona: indawo yokubhaka, ibhusha, isitolo esikhulu, izindawo zokudlela, ...
Isikhungo sezitolo saseParidis siyimizuzu emi-5 ngemoto. Ungakwazi kalula ukuthenga kwakho lapho.
Inombolo yepholisi: 44109000255C6